Wholesale mwana chikafu homwe Mugadziri uye Mutengesi | Yingzhicai
Simuka homwe ndizvo zvinoita zvigadzirwa kumira pasherufu kana tafura uchizadza nezvigadzirwa mukati, seimwe yeakanakisa simuka homwe mutengesi muChina, isu tine yakazara yakazara simuka homwe sarudzo yesarudzo yevatengi vedu, seimwe yeakanakisa hunyanzvi hwekupakata bhegi zvigadzirwa zvinobuda mumakore apfuura izvo zvinogadzira zvakawanda zvirinyore mupaketi indasitiri.Vacheche chikafu homwe vakaita samwari kune avo vabereki vanogara vakagarika.
Chinhu Chikafu chevana homwe
Kushandisa Inokodzera chikafu chevacheche, senge Fruit puree, cheese paste, chikafu chinowirirana chevacheche nevana vadiki. Chibage unama kana chimwe chinhu
Simuka homwe ndizvo zvinoita zvigadzirwa kumira pasherufu kana tafura uchizadza nezvigadzirwa mukati, seimwe yeakanakisa simuka homwe mutengesi muChina, isu tine yakazara yakazara simuka homwe sarudzo yesarudzo yevatengi vedu, seimwe yeakanakisa hunyanzvi hwekupakata bhegi zvigadzirwa zvinobuda mumakore apfuura izvo zvinogadzira zvakawanda zvirinyore mupaketi indasitiri.Vacheche chikafu homwe vakaita samwari kune avo vabereki vanogara vakagarika. Zvikwama izvi zvine pureed izvo zvinokodzera mwana, sekureva kwevanachiremba vevana, zvikwama zvekudya zvakanyanya kukosha nekuti zvinokurumidza uye mubatanidzwa wakakwana wehutano. Izvi zvinodaro nekuti homwe dzekudya dzinosanganisa michero, miriwo, uye mapuroteni chikafu pane imwe nguva chichiita kuti chigadzire.
Chikafu chevana uye Yogurt Spout homwe ndiyo yakanyanya kurongedza chikafu kune vacheche nevana. Iko kurongedza hakusi kungorema uremu uye nyore, asi zvakare kwakachengeteka kune vana 'kushandisa.
Homwe yespout ndeyeBPA yemahara yekuona kuchengetedzwa kwechikafu. Homwe yespout ine yakanakisa chipingamupinyi mashandiro inogona kuchengetedza chikafu chekudya.
Chikafu chiri nyore kusvinirwa kunze; anti-choke cap inogona kudzivirira vana kubva kumedza chivharo netsaona.
homwe dzatora nyika yechikafu chevana nedutu. Izvo zviri nyore, zvisina kuchena uye tout akasiyana siyana evhenji uye musanganiswa wekudya. Homwe dziri nyore kushandisa uye dzinopa mukana wekuchinjika kuvabereki, dzichipa chikafu chinotakurika chinoenderana nehupenyu hwakabatikana hwemhuri dzakawanda nhasi.
Pashure: homwe inodzivirira
Zvadaro: achisimuka bhegi